ဖခင်ဖြစ်သူမှ သမီးအရင်း ၂ ယောက်ကို (၁)ရက်ခြားတစ်ခါ၊(၂)ရက်ခြား တစ်ခါ သားမယားပြုကျင့်...! - Thadin
HomeNEWSဖခင်ဖြစ်သူမှ သမီးအရင်း ၂ ယောက်ကို (၁)ရက်ခြားတစ်ခါ၊(၂)ရက်ခြား တစ်ခါ သားမယားပြုကျင့်…!
May 18, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ဖခင်ဖြစ်သူမှ သမီးအရင်း ၂ ယောက်ကို (၁)ရက်ခြားတစ်ခါ၊(၂)ရက်ခြား တစ်ခါ သားမယားပြုကျင့်…!
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ပင်ရွှေထီလမ်းတွင် ဖင်ခင်ဖြစ်သူမှ သမီးအရင်း(၂)ဦးအား သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
တရားလိုသမီးကြီးမှာ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ အသက်(၁၄)နှစ် အရွယ်ခန့်က မောင်ဖြစ်သူတွင် ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ အင်းစိန်ဆေးရုံတွင် တစ်လခန့် ဆေးကုသနေစဉ်….
ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ရန်ကြံစည်စဉ်ငြင်းဆန်ခဲ့သော်လည်းဆူပူကြိမ်းမောင်း၍ ရိုက်မည်ပြုသဖြင့် ကြောက်၍ ထိုနေ့တွင် (၁)ကြိမ် ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ နေထိုင်ခဲ့ရသည့်အပြင် …..
ဖခင်ဖြစ်သူမှ ၄င်းနှင့် သားမယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရန် လက်မခံပါကရိုက်သဖြင့် ကြောက်၍ (၁)ရက်ခြားတစ်ခါ၊(၂)ရက်ခြား တစ်ခါ၊ ဖခင်ဖြစ်သူ သားမယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းဆက် ဆံခဲ့၍ ကိုယ်ဝန်(၁) ကြိမ်ပျက်ကျဖူးသည့်အပြင် …..
ယခုတွင်လည်း ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်စွာငြိမ်းတွင် အသက်(၁၃)နှစ် (၈)လ ညီမဖြစ်သူကို လွန်ခဲ့သော (၁)နှစ်ကျော်ခန့်က မိခင် အင်းစိန်ဆေးရုံတွင်ကလေးမီးဖွားနေချိန်တွင် ၎င်းတွင် ဆေးရုံစောင့်ရသဖြင့် …..
နေအိမ်တွင် ညီမဖြစ်သူ မ▪▪▪ကျန်ရှိနေခိုက် ဖခင် ဦးကျော်စွာငြိမ်းမှ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ရန် ကြံစည်စဉ် လက်မခံဘဲငြင်းဆန်ရာ ရိုက်နှက်သဖြင့် ကြောက်၍ သားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ် ဆက်ဆံခဲ့ရကြောင်း…..
လွန်ခဲ့သော (၅)လခန့်က ၎င်းနှင့် မိခင်တို့မရှိခိုက် ညီမ မ▪▪▪အား ဘောင်းဘီမချွတ်ဘဲ အပေါ်မှ တတ်ခွ ပြီး သားမယားအဖြစ်ကျင့်ရန် (၂/၃)ကြိမ်ခန့် ကြံစည်ခဲ့သည်ဟု ညီမဖြစ်သူမှ ပြောပြသဖြင့် သိရှိခဲ့ပြီး ၆/၇- ၃- ၂၀၁၉ ရက်နေ့ ညများတွင် မိခင်အိပ်ပျော်နေစဉ် …..
ဖခင်ဖြစ်သူမှ ၄င်းနှင့်သားမယားအဖြစ် နေထိုင်ရန်ပြောဆိုရာ ၎င်းမှ လက်မခံသဖြင့် ရိုက်နှက်ခံခဲ့တယ်”ဟု သမီးကြီး မ▪▪▪မှ ၂၀၁၉ မတ်လ ၉ရက်နေ့ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းလာတယ်ဟု လှိုင်သာယာမြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ လှိုငျသာယာမွို့၊ (၄)ရပျကှကျ၊ပငျရှထေီလမျးတှငျ ဖငျခငျဖွဈသူမှ သမီးအရငျး(၂)ဦးအား သားမယားပွုကငျြ့မှုဖွဈပှားကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ထံမှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။
တရားလိုသမီးကွီးမှာ၂၀၁ဝခုနှဈ၊ အသကျ(၁၄)နှဈ အရှယျခနျ့က မောငျဖွဈသူတှငျ ကြောကျကပျရောဂါဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူနှငျ့အတူ အငျးစိနျဆေးရုံတှငျ တဈလခနျ့ ဆေးကုသနစေဉျ….
ဖခငျဖွဈသူမှ သားမယားအဖွဈ ပွုကငျြ့ရနျကွံစညျစဉျငွငျးဆနျခဲ့သျောလညျးဆူပူကွိမျးမောငျး၍ ရိုကျမညျပွုသဖွငျ့ ကွောကျ၍ ထိုနတှေ့ငျ (၁)ကွိမျ ဖခငျဖွဈသူမှ သားမယားအဖွဈ ပေါငျးသငျးဆကျဆံ နထေိုငျခဲ့ရသညျ့အပွငျ …..
ဖခငျဖွဈသူမှ ၄ငျးနှငျ့ သားမယားအဖွဈပေါငျးသငျးဆကျဆံရနျ လကျမခံပါကရိုကျသဖွငျ့ ကွောကျ၍ (၁)ရကျခွားတဈခါ၊(၂)ရကျခွား တဈခါ၊ ဖခငျဖွဈသူ သားမယားအဖွဈပေါငျးသငျးဆကျ ဆံခဲ့၍ ကိုယျဝနျ(၁) ကွိမျပကျြကဖြူးသညျ့အပွငျ …..
နောကျထပျသမီးမိနျးကလေးတဈဦးမှာမှေးဖှားပွီး(၅၄) ရကျအကွာတှငျ သဆေုံးခဲ့ပွီး ယခုအခါတှငျလညျး ဖခငျဖွဈသူနှငျ့ရရှိသော (၄)နှဈအရှယျ သမီး(၁)ဦး မှေးဖှားခဲ့တယျ။
ယခုတှငျလညျး ဖခငျဖွဈသူ ဦးကြျောစှာငွိမျးတှငျ အသကျ(၁၃)နှဈ (၈)လ ညီမဖွဈသူကို လှနျခဲ့သော (၁)နှဈကြျောခနျ့က မိခငျ အငျးစိနျဆေးရုံတှငျကလေးမီးဖှားနခြေိနျတှငျ ၎င်းငျးတှငျ ဆေးရုံစောငျ့ရသဖွငျ့ …..
နအေိမျတှငျ ညီမဖွဈသူ မ▪▪▪ကနျြရှိနခေိုကျ ဖခငျ ဦးကြျောစှာငွိမျးမှ သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ရနျ ကွံစညျစဉျ လကျမခံဘဲငွငျးဆနျရာ ရိုကျနှကျသဖွငျ့ ကွောကျ၍ သားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျ ဆကျဆံခဲ့ရကွောငျး…..
လှနျခဲ့သော (၅)လခနျ့က ၎င်းငျးနှငျ့ မိခငျတို့မရှိခိုကျ ညီမ မ▪▪▪အား ဘောငျးဘီမခြှတျဘဲ အပျေါမှ တတျခှ ပွီး သားမယားအဖွဈကငျြ့ရနျ (၂/၃)ကွိမျခနျ့ ကွံစညျခဲ့သညျဟု ညီမဖွဈသူမှ ပွောပွသဖွငျ့ သိရှိခဲ့ပွီး ၆/၇- ၃- ၂၀၁၉ ရကျနေ့ ညမြားတှငျ မိခငျအိပျပြျောနစေဉျ …..
ဖခငျဖွဈသူမှ ၄ငျးနှငျ့သားမယားအဖွဈ နထေိုငျရနျပွောဆိုရာ ၎င်းငျးမှ လကျမခံသဖွငျ့ ရိုကျနှကျခံခဲ့တယျ”ဟု သမီးကွီး မ▪▪▪မှ ၂၀၁၉ မတျလ ၉ရကျနေ့ အမှုဖှငျ့တိုငျတနျးလာတယျဟု လှိုငျသာယာမွို့ ရဲတပျဖှဲ့ထံမှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။
အဆိုပါဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသတျ၍ ပွဈမှုကြူးလှနျသူ ဦးကြျောစှာငွိမျး (၄၇)နှဈအား လှိုငျသာယာမွို့မရဲစခနျးမှ (ပ) ၁၃၁၄/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့၍ တရားခံဖမျးဆီးနိုငျရေး ဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။
ဦးခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူမှ”နင့်သမီးကို ဇင်ဝိုင်းတို့ ခုတ်သတ်လို့ သေပြီ”ဟုပြောပြရာ…!
This Month : 36899
This Year : 232297
Total Users : 591321
Total views : 2712472